Ihe 8 kachasị na-enwe mmetụta nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na ntanetị na ụwa | AASraw
/blog/Ngwá Mgbochi Mmekọahụ/Ihe 8 kachasị na-enwe mmekọahụ na-akpata ọgwụ ọjọọ na ụwa
Ihe na 08 / 29 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Ngwá Mgbochi Mmekọahụ. O nwere 59 Comments.
Ọnwụ nke libido, ma ndị inyom ma ndị nwoke, bụ nsogbu nkịtị, ọ bụ n'ihi ike ọgwụgwụ, nchekasị, afọ ma ọ bụ nanị usoro. Iji kpalie agụụ, enwere ọgwụ ike eji eme ka nke a.
Na 1998, Nchịkwa Na-ahụ Maka Ọgwụ na United States na Europe (FDA na EFSA) kwadoro ED maka azụmahịa nke Viagra (), nke mere ka ọ nwee mmetụta zuru ụwa ọnụ. A na-ebipụta 171599-83-0 na nsonaazụ nke sildenafil na akwụkwọ akụkọ ahụike bụ New England Journal of Medicine.
Nkọwa ọgwụ ọjọọ
Ndị na-eji nwoke
Tadalafil (171596-29-5), na-eji ya na ọgwụgwọ nke nrụrụ erectile. Tadalafil bụ ọgwụ na-egbochi ụdị 5 (PDE-5) nke enzyme nke phosphoriesterase bụ nke na-akpata ịdabuta vasodilator nitric oxide, nke a na-ere ugbu a dika mbadamba n'okpuru aha ahia Cialis. Enwekwara ya na nso nso a maka ọgwụgwọ ọrịa ọbara mgbali elu, na-ejikwa ya maka ọnọdụ ndị ọzọ. Mbadamba nkume nke Cialis, nke 5mg, 10mg na 20mg nke dose, bụ agba odo na-ekpuchi ya na fim ma n'ụdị almọnd. Ụlọnga a kwadoro maka ọbara mgbali elu bụ 20 mg ma na-ere ahịa n'okpuru akara Adcirca.
Ihe omumu omumu gosiri na tadalafil nwere ike ime ka oria ogwu na-egbu egbu. A kwenyere na nke a bụ nsị nke nitrates na tadalafil na ụzọ nitric oxide / cGMP. Ya mere, a na-amachibido ndị ọrịa na-ewere ụdị ụdị nitrates ọ bụla n'iji ngwaahịa a.
Sildenafil agwakọta 171599-83-0 bụ ọgwụ eji agwọ ọrịa nke erectile na ọbara mgbali elu (PPH). Sildenafil nwere ike imebi ọrụ PDE5 na ụmụ mmadụ. PDE5 na-egosi ya nke ukwuu na ogbo na ihe ndị ọzọ. Mgbe ọ nwụsịrị sildenafil, akwara ụbụrụ cavernosum vasomotor na-agbaso n'okpuru ọgwụ ahụ, ọbara a na-agbapụta, okpukpu cavernes na-eme mkpọtụ, a na-ewetakwa mkpịrịsị ahụ, si otú ahụ na-emepụta ọgwụgwọ na-adịghị arụ ọrụ na penile erectile.
Ndị ọrịa na-arịa ọrịa penile erectile nwere nkezi oge nke 27 minit ole na ole nchịkọta ọnụ (a na-ekesa data ịgbagha n'etiti 12 na 70 nkeji).
Vardenafil 224785-91-5 ejiri mee ihe na-adịghị mma na penile erectile. Nke a bụ ụdị 5 phosphodiesterase (PDE5). Ọchịchị ọnụ nke ọgwụ a nwere ike ịmepụta ogo na ogologo oge iji meziwanye ọnụ ọgụgụ nke ndị nwoke na-arịa ọrịa na-adịghị mma. Nbido na ntinye nke penile erection nwere ihe jikọrọ ntụrụndụ nke sel dị nro.
Na mgbakwunye na a na-eji agwọ ọrịa na-erectile, vardenafil nwekwara ike igbochi ejaculation.
Avanafil 330784-47-9 bụ ọgwụ ọgwụ edere site na otu ndị na-emepụta PDE-5 na-eji ọgwụgwọ erectile eme ihe. Vardenafil anọwo na-egosi na ọ bụ ọgbọ ọhụrụ nke phosphoriesterase 5 (PDE5), na vardenafil hydrochloride dị nnọọ ukwuu, dị oke nhọrọ, ma kwado ya. Ọbịbịa ya ewetawo nhọrọ ọhụrụ maka ọgwụgwọ nke arụ ọrụ erectile (ED).
Mmetụta nke ndị na-emegide PDE-5 chọrọ agụụ mmekọahụ. Dabere na nrụpụta nke onye ọ bụla na nkwado ya, a pụrụ ịgbatị dose ahụ ruo na 200 mg ma ọ bụ belata na 50 mg. E jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-emepụta PDE-5, a gosipụtara selectivity nke avanafil maka phosphodiesterase-5 (PDE-5), na-eme ka ọ dịkwuo mma.
Zydena (Udenafil 268203-93-6) ka e mepụtara na South Korea (site na Dong-A Pharm), nke malitere na 2005. Udenafil bụ onye mmechi PDE-5. A na-ewere Zydena dịka ọgwụ dị mma maka nrụrụ erectile na-enweghị mmetụta dị oke egwu dị ka ọhụụ na-adịghị ahụ anya, ọ dịghị mmetụta dị oké njọ a chọtara ugbu a. Ma nke ahụ bụ oge dị mkpirikpi n'ahịa mba ụwa, ọ bụghị ọtụtụ ọmụmụ ihe. Oge 30 dị mkpa iji nweta ọgwụgwọ ahụ. Mkpụrụ ingestion, ụdị usoro ọgwụgwọ, njigide ihe, usoro omume dị ka Viagra.
147359-76-0 Flibanserin bụ ọgwụ e mepụtara maka ọgwụgwọ nke ịda mbà n'obi, ma a chọpụtawo na ọ na-adighi ike na mpaghara a, ma ugbu a ka a kwadoro maka ọgwụgwọ nke ịkwa ahụ nke ụmụ nwanyị (HSDD) na ụmụ nwanyị - Otú ọ dị, nrụpụta ọrụ ekwenyeghi na ebe a eburu otutu esemokwu gburugburu isiokwu nke flibanserin (Addyi) na ihe kpatara ya.
aasraw. Na nyocha ndị a na-ahụ anya, a chọpụtawo na ihe ahụ na-eme ka 0.5 na 1 nweta ọnụ ọgụgụ nke ahụmahụ na-aga nke ọma na otu ọnwa, jiri ya tụnyere placebo, ọrụ dị mma ma dị oke ọnụ. Ụmụ nwanyị ndị na-amụmụmụ ihe ahụ malitere ya n'etiti nkezi 2 na 3 na-enwe afọ ojuju ọhụụ kwa ọnwa.
Hinge HCL Flibanserin N'uzo nke ime ihe, ọ na-eme na ụzọ ntanetransmitter, ma na-akpali akpali ma na-arụ ọrụ. Site na mmegide agonist na ndị natara 5-HT 1A nke serotonin, usoro dịka nke ọgwụ dị iche iche antidepressant na site na mmegide nke ndị natara 5-HT 2A.
Napoxetine HCL 119356-77-3 bụ ọgwụ eji eji agwọ ọrịa ejaculation. Ọ bụ onye na-emechi ihe omimi nke serotonin nke na-ewepụta oge na arụmọrụ. N'iburu na ọnọdụ ọmụmụ ihe gara aga, enwere ike ịmepụta ugboro atọ ma ọ bụ anọ nke oge ejiri aka nke ejaculation. Tụkwasị na nke ahụ, dapoxetine nwere ike imeziwanye afọ ojuju mmekọahụ na ikike a na-ahụ maka ịjaja nwoke, ma belata nhụjuanya na nsogbu ndị ọzọ.
Dyclonin HCL 536-43-6 bụ anesthetic kachasị elu nke a pụrụ iji mee ihe maka mgbochi nke membranes mucous tupu ule na usoro nyocha. A na-ahụkwa ya na olulu mmiri na sprays maka akpịrị na akpịrị. A pụkwara iji Dyclonin mee ihe iji belata ihe mgbagwoju anya.
Ngwa a nwere ike igbochi nnyefe nke mmetụta dịgasị iche iche ma ọ bụ nkwalite, na-egbochi mmetụta nke mmetụ na ihe mgbu, ma nwee mmetụta analgesic, antipruritic na bactericidal na akpụkpọ ahụ.
Ngwa a bụ ụdị anesthetic dị n'ógbè ketone. O nwere ngwa ngwa na-adịru ogologo oge. Ọ nwere antipruritic, analgesic na bactericidal utịp ke ikpa.
Mmechi na nkwenye
Ihe mere ị ga eji eji ọgwụ ọjọọ eme ihe
Ngwunye ọgwụ nwoke nwere ike inyere gị aka dozie nsogbu ụfọdụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-akpali mkpali ruo nwa oge, nsogbu gị ka edobebeghị, egbula oge ị gakwuru onye ọkachamara (ọkachamara ma ọ bụ dọkịta) iji kpughee nsogbu gị. Ndị nke a ga - enye gị ndụmọdụ na ngwọta iji lụọ ya. Nke a bụ ihe mgbaru ọsọ dị iche iche zuru ezu nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
-Help ka ị nwetaghachi obi ụtọ n'oge ị na-enwe mmekọahụ
Nke a bụ nzube bụ isi nke ọgwụ nwoke na nwanyị: iji nyere ndị mmadụ aka inwe obi ụtọ mgbe ha na nwoke ma ọ bụ nwunye ha nwee mmekọahụ. Maka nke a, o doro anya na ọ dị mkpa iburu n'uche usoro a na-egosi na igbe ngwaahịa ahụ, ma ọ bụrụ na ị na-akwanyere ya ùgwù, a ga-eme ka libido gị bụrụ nke a na-enweghi ike ịchọta.
- Na-alụ ọgụ na blockages na-alụ ọgụ megide nsogbu erection
Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu nsogbu erection, ọgwụ ike nwoke nwere ike inyere gị aka ịlụ ọgụ. Na mgbakwunye na ịlụ ọgụ megide nsogbu a, ị ga-ahụkwa mmembụ na-enwe afọ ojuju, ị ga-enwekwa ike ime ka di gị ma ọ bụ nwunye gị nwee ike ghara ịtụ ụjọ "ntiwapụ" n'oge ahụ; mmetụta na-eme ihere ma na-eme ihere n'oge.
Ụmụ nwanyị enweghị nsogbu ọ bụla. Ọzọ, iji merie nsogbu a, ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịmasị. Na ndị inyom ikpeazụ a, ihe ngbochi gị ga-apụ n'anya na ị ga-enwekwu mmetụta mgbe ị na-eme ihe.
- Mee ka mmekọrịta gị na mmekọrịta gị dịkwuo mma
Ị chọrọ inwe mmekọahụ siri ike? Ị na-eche n 'ịchọta obi ụtọ mgbe ị na-eme ihe? Ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike inyere gị aka inwetaghachi mmetụta ndị ahụ! Ngwaahịa a nwere ike were ụmụ nwoke na ndị inyom chọrọ ka ha na-enwe mmekọahụ siri ike ma na-achọ ka mmekọrịta ha mee n'ọnọdụ kachasị mma.
Ya mere, ịṅụ ọgwụ ọjọọ ga-enyere gị ezigbo aka ma kelee ya, mmekọrịta gị na mmekọrịta chiri anya ga-abụ ihe zuru okè!
- Na-enyere gị aka ịmalite
N'oge ndụ, enwere ike inwe oge mgbe nwoke ma ọ bụ nwanyị anaghị achọ ka ya na di ma ọ bụ nwunye ha nwee mmekọahụ. Nsogbu a bụ ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụ mmadụ, ọ pụkwara ịbụ n'ihi ihe dị iche iche: ike ọgwụgwụ, nsogbu onwe onye, ​​nchekasị ... Ndị a nwere ike ime ka mbelata na ịṅụ ụtọ.
Iji nwetaghachi echiche abụọ a, ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịdị irè. N'ezie, ọ nwere ike inyere gị aka ịkwalite nkwonkwo gị ma nwetaghachi agụụ mmekọahụ ụfọdụ!
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ụfọdụ iji mee ka obi ụtọ dịkwuo ụtọ, a bụ isiokwu bara uru!
Kedu ụdị ọgwụ ọjọọ kacha mma maka ụmụ nwoke?
Ugbu a, e nwere ọtụtụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ maka ndị ikom n'ahịa. Ịhọrọ na ịzụrụ ihe kasị mma nwere ike isiri ike ma ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ onwe gị furu efu na ihu nhọrọ ndị a. N'okwu ndị ọzọ nke isiokwu a, ana m enye gị ọtụtụ ọgwụ ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ nke ga - enyere gị aka imezi libido gị n'ezie!
Mana tupu ị chọpụta ha, mara na ihe mbụ ị ga-eme bụ ịgwa dọkịta gị okwu. Onye ọkachamara a ga-agwa gị ma ọ bụrụ na ịnweta ihe na-akpali akpali dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dakọtara na ọnọdụ ahụ ike gị dum. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ike inye ọtụtụ n'ime mmepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka Viagra ma ọ bụ Vialis na ọgwụ ọgwụgwọ ma ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ịjụ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ha.
Ọzọkwa, ngwaahịa ndị dị n'okpuru ebe a abụghị ndị ọrịa AIDS. Ha anọghị ebe ahụ iji mee ka ị na-emekwu ihe ị na-eme, ma na-eme ka ịbawanye ọbara na-abanye n'ime mkpanaka gị iji nweta ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọahụ mgbe ị na-enwe mmekọahụ.
Mmetụta ndị a ga-enyere gị aka inwe ụlọ na-enye afọ ojuju, ma ọ bụghị n'egbughị mgbalị. Ka o wee mee, a ghaghị itinye ntinye mmekọahụ.
Dịka PDE5 inhibitor, nyere aka kwalite mgbasa ọbara, ịmịcha mkpụrụ obi bụ ngosipụta nke nsonaazụ
N'isiokwu ọzọ, ị ga-eso kọwaa nkọwa ọ bụla maka iji ọgwụ ọjọọ eme ihe. gụnyere ọgwụ na tadalafil, mmekọrịta flibanserin ... yana.
N'isiokwu ọzọ, ị ga-ekerịta ihe ọmụma zuru ezu banyere ọgwụ ọjọọ ọ bụla. Gụnye ọgwụ, usoro mmetụta, ojiji ... wdg.
N'ihe ọzọ, ị ga - enweta ozi ndị ọzọ. Ọ bụghị naanị na mmetụta nke tadalafil ma ọ bụ mmetụta mmetụta Flibanserin, na ozi usoro onyonyo ... yana.
Ọ bụghị Viagra dị na ụdị ntụ, ihe dị na Viagra bụ sildenafil citrate powder
Ajụrụ m di m ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịnwale ọgwụ ọjọọ ndị a n'otu oge. N'otu oge, achọpụtala m na enwere ihe dị iche na arụmọrụ anyị n'oge ahụ anyị ji. Ebeebo nwere ike, ma ọ bụ na ọ bụ n'ezie mmetụta nke ya. Ma, ọ bụghị akụkụ nke mmekọahụ anyị na-eme kwa ụbọchị. Naanị mgbe anyị chọrọ ihe dị iche.
Onwe m, echebeghị m ụdị ọgwụ ọjọọ ọ bụla, mana m na-edebe isiokwu a maka nzube n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na ọ nwere ike ime ka inwe mmekọahụ nwee ọganihu karị, mgbe ahụ ahụghị m ihe ọ bụla mere ị gaghị eji ya. N'agbanyeghị nke ahụ, echere m na a ghaghị iji ọgwụ ndị a mee ihe n'ókè iji mee ka ọ ghara ịdabere na ya.
Ndị ọgwụ ọjọọ ndị a hà dị mma? Enwere m olileanya na ha agaghị eme ka ịdabere na ya. Karịsịa, ịgakwuru dọkịta ọkachamara kachasị mkpa.
Ọ dị mma ọgwụ ndị a dị maka ndị ikom na ndị inyom. Ha dị ka ihe mgbakwunye ahụ ike ndị dọkịta nwere ike ịkọ ma kwadoro.
Ọ dị mma ọgwụ ndị a dị na ya ka ndị mmadụ wee nwee ike ịmalite inwe mmekọahụ. Ọ dị mma ịchọta ihe ọ bụla na njedebe.
dapoxetine ga - enyere aka belata mmekọrịta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike inwe ya mere ọ ga - abụ ihe amamihe dị na ya iji nwalee ya maka onye ọlụlụ nke nwere nsogbu mmekọahụ dị njọ nke ụdị a.
Ọgwụ ọjọọ maka oke mmekọahụ dị ka nke a anaghị arụ ọrụ n'onwe ha, onye ahụ aghaghị itinye mgbalị site n'aka onye ọrụ ahụ ma kwupụta ya n'ụzọ doro anya na ọ chọrọ mkpali nke onye ọrụ ahụ.
Amaara m na ndị a bụ ọgwụ dị mma maka ịmalite iji mmekọahụ eme ihe, mana ọ ga-adị mma ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ ụfọdụ site na nrụpụta mmetụta ndị ọzọ maka ịkpachara anya.
Ọtụtụ nsogbu alụmdi na nwunye na-esi n'aka ndị ikom na-ebu spam na oge ejaculation. Ọ dị mma na anyị nwere ọgwụ na-eme ka mmekọrịta ọgwụ ọjọọ dị ka nke a iji dozie nsogbu a.
Ya mere, ị na-ekwu na mmekọahụ ịkwalite ọgwụ, viagra, ugbu a na ntụ ntụ? Ọṅụ! Ugbu a ị na-enweta viagra maka tii gị. Ma, enwetaghị ya, ọ gaghị eme ka ịrụ ọrụ gị dịkwuo mma, nanị na-akwụsị gị bisikiiki site na-aga na-agba agba hahahahaha.
Nke a ọ bụ eziokwu? Ya mere, nke a ga-eme ka mụ na 15 gbasaa mmekọahụ? A ghaghị ịmalite ịkwa iko nke ukwuu na ọgwụ ọjọọ .hahahah
Rhona Burchill09 / 22 / 2018 na 9: 05 pm
Amachaghị m ihe kpatara m ji nọrọ ebe a, mana amaara m ihe gbasara nsogbu nsogbu. M pụtara na mgbe m lụrụ di ọtụtụ afọ, di m ugbu a na-ewere mmezi iji bulie ya mbanye. Ọ bụrụ na nke a bụ ochie ụbọchị ọ ga-ala azụ ma ugbu a, ọ dị mma na ya.
Victor09 / 22 / 2018 na 8: 32 pm
Enweghị m ike ịme ọgwụ ike ma ọ dịkarịa ala ma a bịa n'ihe gbasara anụ ọkụ. Ihe ndị dị egwu dị ka ginseng bụ atọ !!! Nanị ụzọ m si eji nke a bụ mgbe m mere agadi. Ee, ana m atụle nke a n'ezie.
Mmebe PDE5 nke Tadalafil na ahụmahụ na-enye obi ụtọ site n'aka ụmụ nwanyị viagra Flibanserin abụọ bụ ihe zuru ezu ma ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwanyị ga-achọ ntinye bara uru. Ekwenyesiri m ike na ọtụtụ ndị nwere mmasị ga-enwe maka ọgwụ ọ bụla edepụtara na US na mba ndị ọzọ.
Nsonaazụ na ọmụmụ ọmụmụ gbasara ezigbo nkwa. Ndụ ndụ nke ahụike dị mkpa nye ọtụtụ ndị, obi dịkwa m ụtọ na a na-enweta ọgwụ ndị a.
Shanna Beltram09 / 22 / 2018 na 1: 03 pm
Ọ dị mkpa ka ị nweta ụfọdụ ozi gbasara ihe ị na-abanye tupu ibanye n'ime akpa ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ na batrị jupụtara na ihe. Iji nyere gị aka, anyị na-agagharị site na nnọkọ ndị na-agba ọgwụ ọjọọ, na-atụle ọmụmụ ihe ole na ole dị, ma jụọ ọtụtụ mmadụ-site na ndị ọkachamara na psychhonauts, site na ndị na-anụ ọkụ n'obi na-amasị ndị dọkịta na ndị ọkachamara na-agwọ ọrịa-dị ka anyị nwere ike isi mee ka ọnụ ọgụgụ a ihe omuma nke di n'ebe ahu banyere ichota elu na ogwu.
Ụfọdụ ọgwụ ọjọọ nwere ike imeghe gị iji mezuo obi ụtọ, ebe ndị ọzọ bụ ndị ohi zuru oke. Ị na-akpọ ọgwụ ahụ, onye ọzọ na-asị na ha nwere mmasị inwe mmekọahụ na ya.
ọ dịghị09 / 22 / 2018 na 5: 45 am
Ọ dị mma na ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-eme ma nwoke ma ọ bụ nwanyị. Nke a ga-enyere ma nwoke ma nwanyị aka inwe mmekọahụ ọ ga-eji ọgwụ ọjọọ a mee ihe ọ bụla.
Nke a ga-enye aka mee ka mmekọrịta gị na ya dịghachi ndụ n'ihi nsogbu nsogbu. ndị hụrụ n'anya kwesịrị ịhapụ ihe a maka mmụgha.
Ịdabere na ọgwụ ndị nwere ike ịṅụ ọgwụ ike nwere ike ịdị njọ. Ọ nwere ike ime ka mmadụ ghara inwe obi ike na ọ ga-enwe mmekọahụ.
Ọ na-akpali mmasị na ọgwụ ndị a na-eme ka ọrụ mmekọahụ na obi ụtọ dịkwuo mma. Daalụ maka ịkekọrịta.
Nchọpụta mmasị. M ga-achọ ịmata ma ọ bụrụ na enwere mmetụta ọ bụla dị na ya site n'iji ọtụtụ Tadalafil ma ọ bụ Flibanserin karịa ihe edepụtara. Daalụ maka ịkekọrịta!
Enwere m obi ụtọ ịchọta isiokwu a, ma jụọ di m ka ọ gụọkwa nke a. Onye ọ bụla chọrọ inwe mmekọahụ, ọ dịghị mkpa ka ihere mee nke a. Daalụ maka ịkekọrịta ozi gbasara ịṅụ ọgwụ ọjọọ na isiokwu a, ọ bara ezigbo uru!
Mụ na onye òtù ọlụlụ m na-achọ ụzọ anyị ga-esi mee ka ndụm na-adọrọ mmasị karị. Ndị ọgwụ ndị a yiri ka hà kwesịrị ịnwa. Daalụ!
Ugbu a, amaara m ihe ọgwụ ọjọọ iji mee ka mmekọrịta nwoke na nwanyị nwee mmekorita nwoke na nwanyị n'oge oge na-akpachi anya! Daalụ, hụrụ isiokwu gị n'anya.
Enwebeghị nsogbu ọ bụla na ihe merenụ ma e wezụga ime ka m na-enwe agụụ oge. Echere m na enwere m ike inweta mgbakwunye PDE5 a afọ ole na ole n'agbanyeghị haha.
M ga-akwado Udenafil ebe ọ bụ dị ka viagra na ndị mmadụ na - eji ya. Ihe dị mma maka nke a bụ njedebe ndị na - adịghị mma.Ọ bụrụ na a na - atụ aro ya maka inwe mmekọahụ
enwe obi ụtọ mgbe nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ dị ezigbo mkpa maka ndị mmekọ ma nwee ike ime ma ọ bụrụ na ha enwe mmekọahụ. M na-atụ anya na ndị na-enweghị obi ụtọ nwere ike iji ọgwụ ọjọọ a eme ihe maka ọdịmma ha.
Mark09 / 20 / 2018 na 11: 34 pm
Enwere m mmasị ebe ị kwupụtara na ọ bụrụ na enweghi nsogbu edozi nsogbu nwoke na nwanyị na ọgwụ ọjọọ a, a ghaghị ịjụ dọkịta. M chere na nke ahụ ga-abụ ihe kachasị mma ime n'ọnọdụ ahụ.
Nunu09 / 20 / 2018 na 11: 27 pm
Mmekọahụ nke di ma ọ bụ nwunye ọ bụla dị ka waya dị ndụ nke mmekọrịta ọbụla dị ka nke a, ọ ghaghị ịkwalite site n'oge ruo n'oge. Ọ ga-adị mma iji ụdị nkwalite ndị a maka ezi mmekọrịta ahụ.
N'oge a, ndị na-eto eto nwere ahụ ike na-eji ọgwụ ọjọọ ndị a eme ihe bụ nsogbu. Otú ọ dị, ha enyerela ndị agadi na ndị na-arịa ọrịa ED aka inwetaghachi akụkụ dị mkpa nke ndụ ha.
Captain U09 / 20 / 2018 na 10: 44 pm
Ikekwe ọ bụ ugbu a ugbu a ikwu okwu banyere ihe ndị a n'èzí, ịṅụ ọgwụ ike, mmekorita nwoke. Ana m eche na inwe mmekọahụ dị oke mkpa dị ka o nwere ike ịbụ nsogbu. Na nke ahụ kwuru, obi dị m ụtọ na isiokwu ndị a dị. Ma ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ na-eji nwayọọ nwayọọ anabata nke a.
Ebee ka ndị dị na Omimi ahụ dị? Enwere m ezigbo obi ụtọ? Ebee ka mmiri na ihe ndị dị? Enwere m maka ihe ị na - akpọ, Ịmara ihe na - abịa.
Na-ada ụda dị ka ọgwụ a gwọrọ nke ọma ma dị mma maka iji mmekọahụ eme ihe. M ga-achọ ịmata ụdị ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ ihe mgbakwunye ịghara iji n'oge Tadalafil ma ọ bụ Flibanserin. Daalụ maka ịkekọrịta.
Ihe ntanetị09 / 20 / 2018 na 4: 14 pm
Horray maka elu libido! Dyclonin na flibanserin nwere ụda dị ka ihe dị ike maka ịrụ ọrụ nke ọma. Daalụ maka ịkekọrịta.
Ihe ọmụma bụ ike, ụdị ọ bụla ọ ga-ewe. Ma ọ dịkarịa ala, ọ dị m mkpa inwe ụdị ihe ọ bụla na-akpali akpali iji mee ka mmekọahụ nweekwu obi ụtọ, ugbu a ka m maara ihe ị ga-eme.
Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị na isiokwu na-agụ ... :). M gbalịrị iji nke a mee ihe - ọ bụ site n'ịchọ ịmata ihe. Ma n'ezoghị ọnụ, Enweghị m mmasị na ya ... Enwere m mmetụta na obi m na-agwụ ngwa ngwa ma na-enwe mmetụta iru ala na isi m.
Avanafil nyeere m aka. Ọ fọrọ nke nta ka m nwee ịda mbà n'obi mgbe m mesoro nsogbu mmekọahụ m, ma na-ekele m na e kenyere m ngwa ngwa.
M ji sildenafil mee ihe mgbe m nwere nsogbu. O were oge, ma ọ dị irè.
Hi enyi, ihe kachasị nke Viagra bụ Sildenafil citrate, CAS 171599-83-0, ị nwere ike ịchọta nkọwa n'okpuru CAS 171596-29-5.
Ekwenyesiri m ike na ndị ikom na-ejighị oge ejaculation agaghị eche iji nwaa Vardenafil dịka ọgwụ nke nwere ike ịmepụta nrụrụ penile na erectile n'ụzọ dị mfe ma nyere aka na ogo oge.
Atụrụ m anya na ụmụ nwoke nwere dysfunction ga-agụ Sildenafil citrate iji zụta iji nyere ha aka ịlaghachi azụ ha. Ọ dị ezigbo mkpa maka ndụ mmekọahụ.
Life09 / 19 / 2018 na 10: 09 pm
Amaghị m ihe kpatara m ji agụ ihe a. haha. Ma nnukwu ozi banyere okwu a. Naanị ijide n'aka ịjụ onye ọkachamara tupu ị takingụ ọgwụ ọjọọ ọ bụla.
M na-adụ ọdụ ka ị kpọtụrụ dọkịta gị tupu gị ewere otu n'ime ọgwụ ndị a. Achọpụtara m na ana m agụkarị ebe mmadụ nwụrụ n'ihi nke a. Na-apụ apụ na-eme n'ụzọ nkịtị.
Ọ dị mma na anaghị m achọ ya. YET na olile anya agaghị adị. Ka o sina dị, m tụrụ anya Viagra abụghị ebe a.
nwa ọhụrụ09 / 19 / 2018 na 7: 05 pm
Ngwunye 8 nwere ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ, nke a na-enye echiche nke nhọrọ ma rụọ ọrụ na njedebe na nhọrọ.Bịnye onye agụụ agụụ mmekọahụ dị ezigbo mkpa ma ndị a ga-enyere aka.
egwuregwu09 / 19 / 2018 na 6: 57 pm
Nke a bụ ihe na-ekpo ọkụ, ndị di na nwunye ga-ahụ ọkwa a iji mee ka ha nwee mmekọahụ. Achọrọ m ozi a ma lee anya na iji onye ọ bụla ga-adị mma maka usoro m. Ozi a bara uru, nwere ike ịzụta cialis n'enweghị ndenye ọgwụ.
Burrows Landen09 / 19 / 2018 na 5: 10 pm
Aga m ejide n'aka na ị ga-agwa ndị a ka ha na ndị enyi na-enwe mmekọahụ na ndị chọrọ ịbawanye agụụ mmekọahụ! Daalụ maka ịkekọrịta.
Ihe ndị a dị ka ọgwụ ndị bara uru iji mee ka ndụ gị dịkwuo mma, ma mara ihe ọgwụ ọjọọ na-eme gị. Daalụ maka ịkekọrịta!
Echere m na ọgwụ ọjọọ dịka nke a nwere ike ịkpata ịdabere, ma mee ka anyị nwekwuo obi ike ma ọ bụrụ na anyị ejighị ha. Ma eleghi anya ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị naghị eji nke a ugboro ugboro, Less dịkwuo.
Enweghị m echiche ọ bụla banyere ọgwụ ọjọọ, ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ ka ukwuu. Na ha na-enyere aka na mmekọahụ?
Le, amaghị m na e nwere ọgwụ dị iche iche maka nwoke na nwanyi. Lee ihe na-adọrọ adọrọ!
Enwere m olileanya na ndị chọrọ ozi a n'ezie ka ha gụọ isiokwu a. M na-eche na agụụ mmekọahụ ndị a ga-enye aka dị ukwuu n'ihi na ọ ga-enyere mmadụ aka inwe ezi mmekọrịta n'etiti ndị di na nwunye.
Nke a bụ ihe dị oké ọnụ ahịa. Nsogbu nke nsogbu na-ewepụrịrị ụfọdụ ezinụlọ dị iche iche nakwa na ọ dị mkpa na a ghaghị ịhazi ụdị ọgwụ ọjọọ dị otú a ma mee maka ọgwụgwọ. Ọ dị ịtụnanya na ọgwụ ndị a nwere ike inyere aka n'ịgbalite libido.
Onye na-emepụta MAGL na onye na-eme FAAH: JW-642 & OL-135 & PF-750 7 Best Nootropics (Smart Drugs) na ahịa nke 2018